DENYO Soundproof Generator in Myanmar – မီးစက် | Vootee
DENYO Soundproof Generator in Myanmar – မီးစက်
December 1, 2016 by vootee
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များအတွက် ပူစရာမလိုဘူးနော်… ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး၊ အရည်အသွေးအမြင့်မားဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး DENYO Generator တွေရှိပါတယ်….. စက်ရုံလုပ်ငန်းသုံး စက်ကြီးများသာမက ရုံးသုံး အလတ်စားများနဲ့ အိမ်သုံးအသေးစားများ
ရှိပါတယ်.. ဒီဇယ် သုံးဖြစ်တာကြောင့် ရေရှည်ကုန်ကြမှုစရိတ်ကိုအထူးလျှော့ချပေးပါတယ်…6kVA-1000KVA အထိ အိမ်သုံးလုပ်ငန်းသုံးရရှိနိုင်ပါသည်….တစ်ခြားမီးစက်များလိုမဟုတ်ဘဲ အသံကျယ်လောင်မှုကိုလျော့ချထားမှုကြောင့်သုံးစွဲသူများ အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပါ….. တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်မသွားအောင် Denyo မှ တာဝန်ယူပါတယ်…… Denyo မှ ၀န်ဆောင်မှုအနေနဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် installation လုပ်ပေးခြင်းနှင့် သက်မှတ်ကာလအတွင်း Free Service ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်… အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
This entry was posted in Business and tagged မ, denyo, generator, Myanmar, soundproof. Bookmark the permalink.
← BaganTrade – 2017 Agricultural Machinery Expo – Pathein, Myanmar
15FMHS YAMAHA Outboard engine in Myanmar – ပဲ့ချိတ်အင်ဂျင် →
By artists Aung Min Min Traditional Dancing Couple | Myanmar Handicrafts | Pinterest
Middle Sleeve of Myanmar Dress Black Color Design
Stretched Fabric Middle Sleeve of Beautiful blouse
Myanmar Machinery - Diesel Generator (ဒီဇယ် မီးစက်)